Izindlela Ezinhlanu Zokuklanywa Kokuphendula Ishintsha i-SEO | Martech Zone
Izindlela Ezinhlanu Zokuklama Ukuphendula Ishintsha i-SEO
ULwesibili, April 9, 2013 NgoMsombuluko, Juni 10, 2013 I-Jayson DeMers
Umklamo ophendulayo ngokusobala uyinto enkulu; into enkulu kangako leyo Mashable umemezele unyaka ka-2013 njengonyaka “wokuklanywa kwemidwebo evumayo.” Ochwepheshe abaningi bewebhu bayakuqonda lokhu - ukwakheka okuphendulayo kushintsha indlela i-Intanethi ebukeka, izwakale, futhi isebenze ngayo.
Kunokuthile okusobala kakhulu okwenzekayo, noma kunjalo. Idizayini ephendulayo ibuye ishintshe i-SEO. Lapho sibheka ngaphesheya kwe-CSS yokwakhiwa okuphendulayo, sibona inguquko enkulu emikhubeni yokusesha eletha umthelela kukho konke ukuseshwa kweselula nobuso bekhompuyutha.
Yiziphi izingqinamba ze-SEO ezilethwa ukufika komklamo ophendulayo? Nazi ezinhlanu.
1. I-Google ithanda ukwakheka okuphendulayo, okusho ukuthi imiphumela yosesho izothanda amasayithi asebenzisa izindlela ezinhle zokuphendula.
Ngenkathi sinqikaza ukumemezela ngempandla ukuthi i-Google iyathandana ne-RWD, singabona ubudlelwano obuqinile bezindlela ezinhle kakhulu ze-RWD. Ngemuva Okuthunyelwe kwebhulogi yakwa-Google mayelana ne-Responsive Design, i-SEO Round Table ishicilele i-athikili echaza izizathu kungani iGoogle ithanda ukwakheka okuphendulayo. Izizathu ezintathu - okuqukethwe okungaphindiwe, akukho izingqinamba ze-canonical URL, futhi azikho izinkinga eziqondisa kabusha - konke kuyingxenye ye-arsenal ye-SEO enamandla.
Lapho i-Google ibaleka, wonke umuntu uyagxuma. Ngakho-ke kungokwakhiwa okuphendulayo. Njengoba iGoogle ibhale empeleni I-Playbook yeselula, kunengqondo ukubanika inhlonipho efanele ngemisebenzi yabo ephathekayo nephendulayo. Njengoba ama-algorithms eqhubeka nokuguqulwa kuwo wonke unyaka we-2013 nangale kwawo, ngokunokwenzeka sizobona amakhanda amaningi ngokwengeziwe kumasayithi asebenzisa ngempumelelo ukwakheka okuphendulayo.
Uma i-Google ikhetha ukwakheka okuphendulayo, lokho kungukushintsha umdlalo omkhulu kosesho.
2. Abasebenzisi beselula balangazelela isipiliyoni esihle, futhi izingosi eziphendulayo ziletha ikhwalithi yesayithi efanelekile kubasebenzisi beselula.
Leli phuzu elingenhla lihlanganiswe kancane. Noma kunjalo, kuyiphuzu elibalulekile le-SEO. Nakhu ukuthi kusebenza kanjani.
Abasebenzisi abaningi bayanda. Iwebhusayithi yakho manje isiyamukela izivakashi ezingomahambanendlwana kunanini ngaphambili. Ngethembe; hlola ifayela le- analytics. Bonke labo basebenzisi beselula badinga umuzwa omuhle. Ukuhlangenwe nakho kwabo kungcono, i-SEO yakho iba ngcono. Nakhu ukuthi kungani.
Ikhwalithi yesayithi yinto ebalulekile ye-SEO. Izinga eliphezulu lokubhimba kungaba isiteleka esikhulu ngokumelene nekhwalithi yesayithi. Uma umuzwa wakho womsebenzisi ungcono, inani lakho le-SEO likhula kakhulu. Lapho abasebenzisi beselula bevakashela isayithi elingenakulungiswa noma eliphendulayo, maningi amathuba okuthi bazogadla, kancane kancane balulaze ikhwalithi yesayithi lakho. Leli phuzu ngekhwalithi ne-UX liyimpikiswano enkulu kaKristina Kledzik, kabani ku-Moz yenza icala lokuthi wonke amasayithi enze ushintsho oluphendulayo.
Njengoba i-SEO ihamba, lolu udaba oluphendula kakhulu. Kwezabo ukuxoxisana ngomklamo ophendulayo, I-Smashing Magazine ithi, "imethrikhi ebaluleke kakhulu ukuthi iwebhusayithi isebenza kanjani ngabantu," futhi igcizelela ukuthi izingosi eziphendulayo zibalulekile.
Ukuze usebenze kangcono izethameli ezikhulayo zeselula, kufanele uzinike ulwazi lomsebenzisi abaludingayo. Ukuphela kwendlela yokulondoloza ikhwalithi yesayithi futhi uthole amazinga angcono okusesha.
3. Amasayithi aphendulayo athola inkomba engcono, futhi ngenxa yalokho, imiphumela ephezulu yokusesha.
Ngenxa yama-algorithms enembile we-Google namathegi e-switchboard, amasayithi anikezwa ngendlela efanele kubasebenzisi beselula. Noma kunjalo, amasayithi aphendulayo ayisinqumo esingcono kakhulu senqubo yokukhomba ehlanzekile, esheshayo nenembile.
Izinqubo zokukhomba zeGoogle zibonakala zithanda amasayithi asebenzisa indlela yokuphendula emsulwa, lawo “masayithi akhonza wonke amadivayisi kusethi efanayo yama-URL, i-URL ngayinye inikezela nge-HTML efanayo kuwo wonke amadivayisi futhi isebenzisa i-CSS nje ukushintsha ukuthi ikhasi linikelwa kanjani umshini. ” Le yingxenye ye- Umhlahlandlela weGoogle "ekwakheni amawebhusayithi alungiselelwe nge-smartphone," ongakwazi ukuwahumushela "kumawebhusayithi asetshenzisiwe." Ngaphezu kwalokho, basho ngokusobala, “lokhu ukucushwa kwe-Google okunconywayo.”
Uma ufuna isiza sakho sikhonjwe yi-Google ngendlela esheshayo futhi engcono kakhulu, ungahle uthathe izwi labo kule nkinga: sebenzisa ukwakheka okuphendulayo. Landela iseluleko sabo, futhi bazokuphatha ngendlela efanele uma kukhulunywa ngokufakwa enkombeni nasekusesheni amazinga.
4. Ukuqukethwe nokuma kokuqukethwe kubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili.
Idizayini ephendulayo imayelana nokunciphisa amafutha amaningi avela kuwebhusayithi. "Ukunciphisa amafutha" kuyingozi, noma kunjalo. Kufanele uqaphele ukuthi ungayinqamuli i-SEO ngenkathi usika futhi uhlwitha.
Ukuze kugcinwe inani lesayithi le-SEO, konke okuqukethwe okufanele kufanele kusundelwe phezulu ekhasini. Isizathu? Ukugcina inani eliphakeme le-SEO, isiza kufanele sibe nokuqukethwe okungaphezulu kokugoqiwe kuzinguqulo zeselula neze-desktop. Izinjini zokusesha zihlola ukubekwa kokuqukethwe kanye okuqukethwe uqobo. Isikhundla sibalulekile.
Abakhiqizi nabathuthukisi abaningi abaphendulayo bathanda ihluzo, izilayida, namamenyu wokufaka isikhala phezulu ekhasini. Imfuhlumfuhlu enjalo ingadala inkinga nge-SEO. Amasayithi amaningi aya ngokwengeziwe ethanda ubuncane nobulula bamasayithi aqhutshwa ngokuqukethwe. Ama-awwwards ichaze "okuqukethwe kuqala" njengenombolo yokuqala ye-web design ye-2013. Kwenza umqondo omsulwa nge-SEO, UX, RWD, CRO (futhi nganoma yisiphi esinye isifinyezo ofuna ukusilahla lapho). Ukugcina izinto zimile ngomkhumbi, letha lokho okuqukethwe okuyigugu okuthanda i-SEO phezulu ekhasini.
5. Ama-URLs eselula, esikhundleni sesayithi eliphendulayo, aseseyinketho ye-SEO.
Ngaphandle kokubhebhetheka komshayabhuqe ku-RWD, abanye odokotela basayikhuthaza indlela ye-URL yeselula. UBryson Meunier ulibeka ngembaba elakhe udaba Isihloko se-Search Engine Land: “Ukuklanywa kweWebhu okusabelayo kusabonakala kunedumela elingafanele lokuba yindlela engcono kakhulu ye-SEO. Eqinisweni, ama-URL weselula ayengakwenza kube yindlela engcono kakhulu ye-SEO. ”
Yebo, lokho kungumthamo omkhulu kakhulu wezikelemu. [Faka izingcweti ezikhuluma ngokuma kwazo endaweni ezithandayo.] Ngokujabulisayo, i-Google manje isingahlukanisa izinguqulo zesayithi. Ngakho-ke, ukuphikelela kwe-URL eyodwa ngezinjongo ze-SEO akuyona impikiswano, ngenxa yokwethulwa kwamathegi ebhodi.
UMeunier wenza icala lokuthi abasebenzisi beselula bacinge ngokuhlukile futhi bafuna imininingwane ehlukile, ehlukile kubasebenzisi bedeskithophu. (Ngiyangabaza.) Ngakho-ke, uthi, bangasizakala kangcono isiza elenzelwe bona kanye nezidingo zabo - isayithi elinikezwe amandla. Ngokwengeziwe, uMeunier ugcizelela ukubaluleka okungahle kube khona kwendawo ehlukile yeselula ngokubuka kwejubane lesiza ne-UXD, egcizelela futhi izethameli ezahlukahlukene zemakethe yomuntu ephathekayo.
Ukunquma inani le-SEO lokuklama okuphendulayo kuncike kuzithameli zakho. Noma i-RWD ivame ukwenziwa futhi idunyiswa kabanzi njenge-SEO Holy Grail, ezinye izinkampani zingakhetha isu le-SEO elibandakanya ama-URL eselula esikhundleni sendlela ephendula ngokuqinile. Njengomthetho ojwayelekile oya phambili, noma kunjalo, isixazululo esiphendulayo sibonakala silungele amandla we-SEO. Ngemuva kwakho konke, ukugcina igunya lokulandelana kwe-URL yakho yoqobo, ukwenza kube lula ukwenza indlela yakho, nokwenza lula ukuphathwa kokuqukethwe konke kuyimikhuba emihle kakhulu ye-SEO eyingxenye yephakethe lokuklama eliphendulayo.
Wonke umuntu uyaqonda ukuthi i-SEO iyinkambu eshintsha njalo. Imininingwane emisha neminye imininingwane ephikisanayo ishicilelwa njalo ngehora. Akekho othusayo ukuthi ukwakhiwa okuphendulayo kushintsha i-SEO. Ukumangala kwangempela kungavela ekutheni zingakanani izinguquko ezibaluleke kangaka. Ukuze uphumelele ngempela ekusesheni, amasayithi kumele abhekane nenguquko ephendulayo, futhi enze okudingekayo ukwenza ushintsho oluphendulayo.
Tags: umklamo ophendulayoseo
Ingxoxo yeDiners Club: Ukwakha Ibhrendi Yezenhlalo
Amabhakede Amathathu Ezikhulumi Zokumaketha Ezokuxhumana Komphakathi
UJun 23, 2013 ngo-8: 05 AM
I-athikili enhle ngempela nezethenjwa ezisekelwa kahle. Angibonanga ukuthi iGoogle inokwesekwa okungaka kweRWD.
Jul 18, 2013 ku-3: 07 AM
I-athikili efundisayo kakhulu, izogcina wonke la maphuzu engqondweni yami ngenkathi kuklanywa iwebhusayithi. Ngiyabonga
Dec 4, 2013 ku-3: 12 AM
Indatshana enhle ngempela: D
Aug 6, 2014 ku-2: 35 AM
Jul 13, 2015 ngo-11: 50 PM
Ngifikile kulo mbhalo muva nje kepha kusasebenza. Ekugcineni nginqume ukuthi amawebhusayithi ami akheke kahle, futhi asebenza kahle impela! Ikakhulukazi ngemuva kokuvuselelwa kwe-SEO yeselula kweGoogle kulo nyaka.